भौतिक पूर्वाधारमा गत वर्षभन्दा राम्रो प्रगतिः मन्त्री नेम्वाङ « Rara Pati
भौतिक पूर्वाधारमा गत वर्षभन्दा राम्रो प्रगतिः मन्त्री नेम्वाङ
१८ मंसिर, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले मन्त्रालयमा तुलनात्मक रुपमा गत वर्षभन्दा राम्रो प्रगति देखिएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिले चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा उनले मातहतका निकायलाई अहिले नै सन्तोष हुन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अझै धेरै गर्न सकिने औँल्याए ।
मन्त्री नेम्वाङले विकास निर्माणमा देखिएका समस्या मिहिन रुपमा पहिचान गर्न सकिए समाधान त्यही भेटिने बताए । उनका अनुसार समस्याको सही रुपमा उजागर हुन नसके समाधान गर्न सकिँदैन । भौतिक पूर्वाधार मुलुकको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा ठूलो बजेट हुनु र खर्चको अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक रहेको बताए । उनले पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा विगत एक दशकमा ठूलो परिवर्तन भएको पनि जिकिर गरे ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्थलगत रुपमा काम गर्ने मन्त्रालय भएको र सोहीअनुसार काम पनि गरिरहेको उनले जनाए ।
मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले मातहतका निकायलाई थप लगनशीलताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । उनले आयोजना प्रमुखलाई कार्यस्थलमा समय दिन समेत आग्रह गरे ।